Ndi Social Media na-amanye ndị ahịa ịpụ site na Mass Media? | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 16, 2017 Douglas Karr
Nke a bụ ezigbo ihe ọmụma na-egosi site na Sprout Social nke nwere nsonaazụ miri emi karịa ndị ahịa nwere ike ịnabata. A na-akpọ infographic Usoro Mgbasa Ozi 6 nke Ga-ewe 2017 ma na-agagharị na ọwa mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla, otu agwa ndị ahịa si agbanwe, yana ọganihu nke teknụzụ dịka ọgụgụ isi.
Ejikọtara ya na vidiyo na-achọ, teknụzụ na-egbochi mgbasa ozi, yana uto nke ọwa 1: 1 dị ka Snapchat na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịtụle ọkwa ha na mgbasa ozi gbawara na-eme kwa afọ. Onye nzụrụ ahịa nwere ikike ugbu a ịchọta ihe dị ha mkpa, mgbe ha chọrọ ya, ebe ọ dị ha mkpa, na ọnụahịa ha chọrọ ya. Nhọrọ dị warara maka ụlọ ọrụ na-arụtụ aka itinye ego na ahụmịhe nke ndị ahịa ha na iwulite mmekọrịta ozugbo.
Ọbụna na mmekọrịta azụmahịa na azụmahịa, ahia di na akaụntụ na-arụpụta nsonaazụ. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi sara mbara anaghị anwụ anwụ, a na-eche ya, atụmatụ ndị ahaziri iche na-amalite ịbugharị njem ndị ahịa - ọ bụghị mgbasa ozi edere ebe niile ha na-anaghị ele anya.
Usoro Mgbasa Social Media 2017
AI AI maka Facebook na Instagram - sfọdụ semblance nke ahụmịhe ọhụụ ọhụụ nwere ike ịbụ na ntanetị dị mkpirikpi maka Facebook, mana ejighị m n'aka na a ga-ahapụ ndị nkịta AI n'oge a na njem mgbasa ozi anyị. Echere m na ojiji nke mbụ ga-abụ iji dakọtara mgbasa ozi na ihe ụtọ anya.
More Chatbots Ọrụ Ndị Ahịa - ebe mkpa nke mmekọrịta na 1: 1 ga-etolite, ekele nwere teknụzụ ga-enyere aka belata akụ dị mkpa iji nweta nsonaazụ dị elu. Enwere ike iji ntụpọ nye ozi zuru ezu na mkparịta ụka mkparịta ụka nke anaghị agbanyụ ndị ahịa ma ọ bụ azụmaahịa - niile ka ị na-abawanye ọnụego ntụgharị ma na-enyere ndị ọbịa aka.
Akwụ ụgwọ ọdịnaya na-aga n'ihu na-achị - Ọ bụrụ n’otu ihe ndị ahịa na-aghọta bụ na mgbasa ozi mmekọrịta na-ewuli mmiri dị n’etiti ngwaahịa na ọrụ gị yana ndị ahịa ma ọ bụ azụmaahịa ịchọrọ ị nweta ha n’ihu. Ka usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-etolitekwu, ịmara na akwa ga-adị oke ọnụ!
Ibu ụzọ na Atụmatụ Business & Analytics - Amaghị m nke ahụ atụmatụ ziri ezi - Ekwenyere m na uru, uru, na ahụmịhe bụ ebe mgbasa ozi mmekọrịta ga-eme ka ị nweta njikọ aka, nnweta, njigide, ma bawanye uru nke mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị. Nchịkọta dị oke mkpa maka nke a - mana achọrọ m ịhọrọ ahụmịhe dị mfe nke na-eme karịa ịtinye plethora nke atụmatụ ndị na-enweghị isi.
Wepụ site na akpaaka - M a bit nke a obi abụọ na nke a dị ka nke ọma. Na 2017, ndị na-ere ahịa ga-achọ akpaaka niile ha nwere ike ijikwa iji nweta obere ihe na obere akụrụngwa. Agbanyeghị, m ga-arụ ụka na ọ ga-abụrịrị akụrụngwa nwere ọkaibe nke na-ege ntị, nkewa, hazie, ma buo amụma njikọta ọzọ na ntanetị site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Shozụ ahịa Ahịa na Instzụta ngwa ngwa - Tinyere ikike ịzụta, inye, ma ọ bụ zipu onyinye dị mfe, itinye ihe ndị ọrụ mepụtara ga-abụ omume na-eto eto. Anyị na-aga ịkekọrịta otu post gbasara Stackla n'oge na-adịghị anya nke ahụ dị ịtụnanya, na-abawanye ọnụego ntụgharị oge ụfọdụ 30% maka ụfọdụ ngwaahịa.
Enweghi obi abụọ banyere uto na ọkaibe mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-enwe na 2017. Ọ bụ ezie na azụmaahịa na-aga n'ihu na-alụ ọgụ - naanị 34% nke obere azụmaahịa na-eji mgbasa ozi mmekọrịta na-akparịta ụka na ndị ahịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa niile kwuru na ọnụnọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ nnukwu ihe kpatara iji nwalee ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ. Na 57% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụta site na akara ha na-eso
Tags: Ihe omume 2017infographicelekọta mmadụ mkpọsaelekọta mmadụ na-esoakpaaka mgbasa ozielekọta mmadụ media infographicusoro mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa ozi mmekọrịta 2017mmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ na-ereịzụ ahịapuo na-elekọta mmadụọnọdụ